ICzar PUBG Lite 🥇 Ukukopa, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
ICzar PUBG Lite kugula
I-PUBG Lite ithathwa njengeyona (ukuba ayibikho ngaphezulu) ethandwayo kunogxa wayo wokuqala, kwaye kungenxa yokuba ukuphumelela ekuhambeni yeyona mvakalelo ilungileyo kwihlabathi.
Ukukopela kancinci; Ungafikelela kwiPUBG Lite yethu emangalisayo yoSuku olu-1!
Uyayithanda indlela oziva ngayo, andithi? Thenga isitshixo seVeki e-1 yePUBG Lite namhlanje!
Yiba ngomnye wabasebenzisi beGamepron abanamava ngokuthenga isitshixo semveliso yenyanga e-1 namhlanje!
Phumelela ngakumbi kwimidlalo yakho yePUBG Lite ngokufumana ukufikelela kwiPUBG Lite Dream Hack yethu! Nantoni na ojonge ukuyiphumeza ngokukopa, sisixhobo esiza kukunceda ukuba uyenze.
I-PUBG Lite Czar yeNkcukacha yeHack
I-PUBG Lite ngumdlalo omtsha ovula amasango ezikhukhula ngobuninzi bezinye izihloko zomlo ohambayo, kodwa bambalwa kakhulu kubo abaya kusondela kumava anikezelwa kubadlali yiPUBG Lite! Kungenxa yoko le nto sigxile ekufezekiseni isixhobo sePUBG Lite Czar apha eWinThatWar, njengoko sisazi ukuba kukho imfuno ephezulu yePUBG Lite Hacks kwezi ntsuku. Ngombulelo, ekugqibeleni ungabeka ukholo lwakho kwimfumba eza kukunceda woyise iintshaba ngokulula.
IsiNgesi / isiRashiya
Ngawo onke amanqaku amangalisayo afakiwe ngaphakathi kwi-PUBG Lite Czar Hack, awunyanzelekanga ukuba uchithe lonke ixesha lokuvuka phambi kwescreen sakho! Iimpawu ezinje ngeSitha se-ESP, ulwazi loTshaba, i-Item ESP, kunye ne-Aimbot ziya kukunceda uthathe iintshaba ngokuthanda-akunamsebenzi nokuba banobuchule kangakanani!
Utshaba ESP (Ibhokisi, amathambo, umgca)
Ulwazi lotshaba (igama, umgama, isixhobo, ibar yezeMpilo)
Injongo yethambo iyaqwalaselwa
Iinjongo ze-FOV ezinokuhlengahlengiswa
I-aimbot echanekileyo ngokuchanekileyo
Iiphalethi ezimibala-bala ze-esp
Cwangcisa imo yokugcina
Malunga nePUBG Lite Czar
Kuza kubakho abadlali abaninzi abanezakhono kwigumbi lakho lokungenisa nangaliphi na ixesha, kodwa iPUBG Lite Czar Hack iya kubalahla ngokukhawuleza. Umzekelo, sikhe saquka isantya sokukhawulezisa kule nguqulo yePUBG Lite Hack, okuthetha ukuba ungabaleka nje kuzo zonke iingxaki zakho ukuba kukho imfuneko! Kukho imibala eyahlukeneyo yokukhetha isixhobo se-ESP, kwaye unokwenza i-FOV Circle ithintele i-aimbot ekujoliseni kwiintshaba ezingaphandle kwento ethile. Nokuba usilela ngokuchanekileyo okanye awunakukhathazeka ukuba ufunde imephu, iPUBG Lite Hack yethu inemqolo.
Kutheni usebenzisa iPUBG Lite Czar ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Ngaba ukhetha ukusebenzisa i-PUBG Lite Hack eneenjongo ezininzi ethembisa impumelelo, okanye uthandaze ukuba inguqulelo yasimahla yentsilelo PUBG Aimbot iphumelele umdlalo? I-WinThatWar ayijongani negama elithi “mhlawumbi”, nje ukuba uyisebenzise iPUBG Lite Czar Hack, incinci kakhulu eya kukuthintela ekuphumeleleni. Imelwe njalo
ukuba nzima kakhulu ukufumana izandla zakho uloyiso, kodwa iWinThatWar iyakwenza ukuba unganakho ukuphumelela ngokuthanda kwakho! Sikwabonelela ngeempawu ezingafumanekiyo kwenye indawo (ezinje ngeRadar ye-2D, iiHacks eziKhawulezayo, i-Intuitive Item ESP, njl.), Isenza indawo yokuma kwindawo enye kwiimfuno zakho zePUBG Lite Hack.
Imenyu yomdlalo ongaphakathi komdlalo ngokuqinisekileyo yeyona nto ibaluleke kakhulu kwi-PUBG Lite Cheat, kuba ngaphandle kokufanelekileyo, uya kudideka kwaye awuyi kuqonda ukuba isebenza njani le nto. Senza izinto zibe lula ngokugcina imenyu yomdlalo ongaphantsi njengoko sinako ngaphandle kokuthintela umsebenzisi ekwenzeni utshintsho. Akusayi kuba nzima ukubona iinketho ze-ESP oziqaqambisileyo, okanye nokujonga kwi-2D Radar yakho- imenyu yomdlalo egqityiweyo ngengqondo. Jonga umgama weentshaba kunye nezithuthi, kunye nokutshintsha kunye nokucima imenyu yomdlalo!
Ukukopela kufuna ubhaliso kulayisho. Ukwenziwa kokukopela kwahlulwe ngo-2 Igama le-akhawunti kunye nesitshixo. Siza kukukhokela malunga nendlela.
Ewe, obu buqhetseba bubungqina bokungagqibeki komjelo (Ngaphandle kwesembozo seNvidia)
Obu buqhetseba boNgaphandle.
Kubaluleke kakhulu ukuba ukhuseleko lukhubazeke ngakumbi ukukhuselwa okukhuselekileyo kwi-BIOS ukuze ukwazi ukusebenzisa obu buqhetseba njengoko ungakhubazekanga uya kuthi ekugqibeleni unike impazamo xa usungulwa.
Hayi, obu buqhetseba abubandakanyi i-hwid spoofer. Sinikezela nge-hwid spoofer eyahluliweyo yePUBG Lite.
Ubuqhetseba bangaphandle, oko kuthetha ukuba kuya kufuneka udlale umdlalo kwimowudi engenamda okanye ngefestile.
ungafumaneki kwaye wakhelwe ukugcina, esi sisixhobo oya kuthi ube nakho ukuxhomekeka kuso kwikamva elibonakalayo. Ungaze uzibale ukuba uphume nini xa iPUBG Mobile Dream Cheat isebenza!
Yenza uloyiko kumchasi wakho kunye ne-PUBG Mobile Cheats
Ilindelwe Lawula kunye nePUBG Lite Czar Hack?